63 Hena na ofi Edom+ reba, nea ɔhyɛ atade a ani hyerɛn fi Bosra+ reba, nea n’atade ama ne ho ayɛ fɛ na ɔde tumi mmoroso yi akyeã yi? “Ɛyɛ me, nea ɔkasa trenee mu,+ nkwagye mu otumfoɔ no.”+ 2 Dɛn nti na wo ntama ayɛ kɔɔ na w’atade te sɛ nea otiatia nsã-kyi-amoa mu yi?+ 3 “Me nkutoo na mitiatiaa nsã-kyi-amoa no mu,+ na na ɔmanfo no mu biara nka me ho. M’abufuw mu na mitiatiaa wɔn so,+ na m’anibere mu na mewɔw wɔn.+ Na wɔn mogya bɔ petee me ntade mu,+ na me ntade nyinaa mu asɛe. 4 Aweredi da wɔ me komam,+ na afe a mede begye me nkurɔfo no adu. 5 Mehwɛe, nanso na ɔboafo biara nni hɔ; ɛyɛɛ me nwonwa, nanso na obiara nni hɔ a ɔbɛboa.+ Enti me basa de nkwagye bae,+ na m’abufuw+ boaa me. 6 Mitiatiaa aman no so m’abufuw mu, na mema wɔbowee wɔ m’anibere mu,+ na memaa wɔn mogya tu guu asase no so.”+ 7 Mɛka Yehowa adɔe+ ne Yehowa ayeyi akyerɛ, nea Yehowa ayɛ ama yɛn+ ne nnepa a ɔnam ne mmɔborɔhunu+ ne n’adɔe mmoroso so ayɛ ama Israel fie nyinaa.+ 8 Ɔtoaa so kae sɛ: “Wɔyɛ me man ampa,+ mma a wɔrenni atoro.”+ Enti ɔbɛyɛɛ wɔn Agyenkwa.+ 9 Bere a wɔn ho hiahiaa wɔn no, ne ho hiahiaa no.+ Na n’ankasa bɔfo gyee wɔn.+ Ne dɔ ne n’ahummɔbɔ nti ogyee wɔn,+ na ɔmaa wɔn so turuu wɔn tete nna no nyinaa mu.+ 10 Nanso wɔtew atua+ na wɔmaa ne honhom kronkron no werɛ howee.+ Enti ɔdan bɛyɛɛ wɔn tamfo,+ na ɔne wɔn koe.+ 11 Wɔkaee tete, n’akoa Mose bere so: “Nea oyii wɔn ne ne nguan so ahwɛfo+ fii po mu+ no wɔ he? Na nea ɔde ne honhom kronkron hyɛɛ ne mu no wɔ he?+ 12 Nea ɔmaa ne basa+ fɛfɛ dii Mose nsa nifa so kɔe, na ɔpaee nsu no mu wɔ wɔn anim+ de gyee din fae afebɔɔ no wɔ he?+ 13 Nea ɔma wɔnantew nsubun mu te sɛ ɔpɔnkɔ a ɔnam sare so nanso wɔanhintiw no wɔ he?+ 14 Sɛnea mmoa sian kɔ asasetaw so no, saa ara na Yehowa honhom ma wɔhomee.”+ Na wudii wo man anim maa wo din ho baa nyam.+ 15 Fi soro hwɛ,+ fi wo tenabea kronkron fɛfɛ hɔ hwɛ.+ Wo nnamyɛ+ ne w’ahoɔden kɛse, w’ayamhyehye+ ne wo mmɔborɔhunu no wɔ he?+ Ne nyinaa atwe afi me ho.+ 16 Wone yɛn Agya.+ Ebia Abraham nnim yɛn na Israel renkae yɛn, nanso wo Yehowa, wone yɛn Agya. Yɛn Gyefo ne wo din fi tete.+ 17 O Yehowa, adɛn nti na woama yɛaman afi w’akwan so? Adɛn nti na woama yɛn koma apirim a ensuro wo yi?+ Wo nkoa nti san bra, abusua a wɔyɛ w’agyapade nti.+ 18 Ebedii wo man kronkron+ no nsam bere tiaa bi. Nanso yɛn atamfo atiatia wo kronkronbea so.+ 19 Bere tenten ni, yɛayɛ sɛ nnipa a wunnii yɛn so da, te sɛ nea wɔmfaa wo din mfrɛɛ yɛn da.+